Messi Oo Ka Hadlay Abaal-Marinta Ballon d’Or Ee Xalay La Siiyey, Maqnaanshihii Ronaldo Ee Xafladda, Mustaqbalkiisa Barcelona Iyo Arrimo Kale - Gool24.Net
Messi Oo Ka Hadlay Abaal-Marinta Ballon d’Or Ee Xalay La Siiyey, Maqnaanshihii Ronaldo Ee Xafladda, Mustaqbalkiisa Barcelona Iyo Arrimo Kale
Xiddiga ugu fiican caalamka ee Lionel Messi oo xalay markii lixaad la guddooniiyey abaal-marinta Ballon d’Or ayaa taageereyaasha Barcelona kaga farxiyey in aanay ka warwarin mustaqbalkiisa iyo qandaraaskiisa sii dhamaanaya ee uu kooxdaas kula jiro.
Xiddiga reer Argentina oo ka sare maray Cristiano Ronaldo oo shan jeer haysta, ayaa waxa xusay waxyaabihii u suurtogeliyey inuu heerkan sare taagnaado muddo ka badan toban sannadood, isagoo soo qaaday ka maqnaanshihii ninka ay aadka u xafiiltamaan ee Ronaldo ee madashii lagu bixinayey abaal-marinta.
“Dadka kooxdu way i garanayaan, waxaanay ogyihiin in aaanay mushkilad laga hadlaa ka taagnayn qandaraaskayga, waxa kaliya ee ka hadhsana waa saxeexa iyo arrimo yaryar oo kale. Markaa ma jirto wax dhibaato ahi” Sidaas ayuu yidhi Lionel Messi oo farxadda u horreysa la wadaagay jamaahiirta Barcelona ee sida weyn garabkiisa u soo taagnaa tan iyo bilowgii xirfaddiisa.
Leo waxa intaa kaddib ka hadlay abaal-marinta Ballon d’Or ee markii lixaad la siiyey, waxaanu yidhi: “Waa mid (Ballon d’Or) heersare ah. Waa qayb xaqiiqo ah oo ka mid ah noloshayda aan ku naaloonayo gudaha iyo dibedda garoonkaba oo aan la wadaagayo qosykayga, carruurtayda, aadna waan ugu faraxsanahay aqoonsigan.”
32 jirkan mucjisada ah waxa uu ku dooday in uu dareemayo inuu waqtigan ka fiican yahay xilliyadii hore xirfad ahaan, taasina u suurtogelisay guushan shaqsiga ah ee cajiibka ah iyo rikoodhkan uu dhigay.
“Mar hore ayaan noqday 32, waxaanan ku socdaa 33 sannadood. Sidii aan mar hore sheegayna waxay wax walba ku xidhan yihiin sida aan jidh ahaan dareemo, maantana waxaan dareemayaa in aan ka wanaagsanahay sidaydii hore jidh ahaan iyo heer shaqsi ahaaneedba, waxaanan rajaynayaa inaan wax badan oo kale samayn doono.”
Lionel Messi waxa kale oo uu ka hadlay ka maqnaanshihii Cristiano Ronaldo ee xafladdii xalay, waxaanu yidhi: “Halkan muu imanin, sababtoo ah muu iman karaynin, mana aha in laga xumaado. Waxa aanu ku naaloonay abaalmarino waaweyn.”